कपिलवस्तुका १० जनाले बुटवलमा कोरोनालाई जिते
कोरोना संक्रमण बढी देखिएको प्रदेश ५ मा निको हुनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ ।
बाँकेको खजुरास्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालबाट शुक्रबार २१ जनाले कोरोनो जितेको भोलिपल्ट शनिबार बुटवलको कोरोना विशेष अस्पतालबाट पनि एक साथ १० जना कोरोना निको भएर घर फर्किएका छन् ।
निको भएका उनीहरु सबै कपिलवस्तुका हुन् । भारतबाट लुकिछिपी आएकाहरूमा संक्रमण बढी देखिएको छ ।
दुई साताअगाडि भर्ना भएका संक्रमितको लगातार दुईवटा रिर्पोट नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्ज गरिएको बुटवल धागो कारखानस्थित कोरोना विशेष अस्पतालका फोकल पसर्न तथा वरिष्ठ कन्सलटेन्ट डा. सुदर्शन थापाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘बिरामीलाई निको बनाएर पठाउँदा खुशी लागेको छ ।
उनले थपे, ‘कोरोनाबाट डराउनु पर्दैन । सजिलै जित्न सकिन्छ भन्ने सन्देश पनि निको भएर जानेले दिएका छन्, उनीहरू घर गएपछि आइसोलेसन नपाएर क्वारेन्टाइनमा राखिएको संक्रमितलाई राखिन्छ । धागो कारखानाको कोरोना अस्पतालमा रूपन्देही र कपिलवस्तुका ३६ जनाले उपचार गराइरहेका थिए ।
यसअगाडि रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकाका २५ वर्षीय युवा निको भएर घर गइसकेका छन् । प्रदेश ५ मा कोरोना संक्रमितको संख्या सबैभन्दा धेरै २७१ छ । जसमध्ये ३२ जना निको भएका छन् भने २ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. राजेन्द्र खनालले मानिसहरू अनुसाशनमा बस्न सकेमा कोरोना संक्रमण रोक्न सकिने बताए ।
उनले भने, ‘संक्रमण अन्त्य कहिले हुन्छ भन्ने यकिन छैन, त्यसले रोग फैलिन नदिन सुरक्षित रूपमा घरैमा बस्नुपर्छ ।’
धागो कारखानामा २ सय बेड थप गरिँदै छ । त्यस्तै बुटवल ११ देविनगरस्थित एन्फा एकेडेमीमा पनि ५० बेडको आइसोलेन सेन्टर बनाइएको छ ।